Inkampani - Jinhua Green Building Industry & Trading Co., Ltd.
I-Jinhua Green Building Industry & Trading Co., ltd iqoqo lomklamo wangaphandle womugqa, ukukhiqizwa, ukuthengisa, ukufakwa ebhizinisini elilodwa elihlanganisiwe. Izinkampani ezithuthukisiwe kwezobuchwepheshe bamanye amazwe ukugaya nokuxuba, umugqa wokukhiqiza usimende we-GRC, ulayini wamandla amakhulu kasimende usimende we-EPS kanye nomugqa oguqukayo we-EPS njengemigqa eminingi, izinto zobuciko kanye nemikhiqizo yochungechunge ehlanganisiwe.
"Ukwenza umsebenzi omuhle, kufanele uqale ucije owakhe", ukuze kuhlangatshezwane nekhwalithi ephezulu, ukucacisa okuphezulu, izidingo zokukhiqiza ezisebenza kahle, inkampani ezimele ngokuzimela yokwakha umhlobiso wodonga lwangaphandle lwesethi ephelele yomugqa wokukhiqiza othomathikhi, umugqa wokukhiqiza othomathikhi ikakhulukazi i-powder mixer, i-othomathikhi ye-powder mixer, i-mixer yesandla, umshini wokuqopha we-CNC, umshini wokusika we-CNC, i-arc eyindilinga, sula umshini we-blade, umshini wokuphela neminye imikhiqizo ehlobene. Ngemishini ye-foam iminyaka eminingi yesipiliyoni sokukhiqiza, imishini ihambisana nokuklanywa okujwayelekile nokukhiqiza, ikhwalithi, ukunemba okuphezulu, okulula ukusebenza. Njengamanje, inkampani ithumele amanye amasethi womugqa wokukhiqiza kuma-emirates ahlangene e-Arab, Saudi Arabia, Spain nakwamanye amazwe. Kuvunyelwe abasebenzisi, ukunikeza ukuhlolwa okuphezulu.
Uyemukelwa enkampanini ukuze uvakashele futhi unikeze isiqondiso!
Imikhiqizo ye-EPS neMechine
Izinkampani ezithuthukisiwe kwezobuchwepheshe bamanye amazwe ukugaya nokuxuba, umugqa wokukhiqiza usimende we-GRC, ulayini wamandla amakhulu kasimende usimende we-EPS kanye nomugqa oguqukayo we-EPS njengemigqa eminingi, izinto zobuciko kanye nemikhiqizo yochungechunge ehlanganisiwe.
Kungani ukhetha umshini wethu
● ikhwalithi ephezulu, ukucacisa okuphezulu, ukukhiqizwa okuhle kakhulu
● Ngemishini ye-foam iminyaka eminingi yesipiliyoni sokukhiqiza
● Vumela ukusebenza okuphephile nokuzenzakalelayo ngokuphelele
I-Automatic Big SPJ150 Batch pre-expander isebenza ngempumelelo eSaudi. Okukhethekile ngobuningi obuphansi. Umshini unokwandiswa kokuqala nokuphindwe kabili, isikrini sokuthinta ne-PLC ilawulwa, ukufinyelela kalula ku-8g / l ...
Umhlobiso we-EPS yinto yokwakha entsha yomhlobiso wangaphandle wodonga nokuhlobisa kwangaphakathi kophahla, okwenzeka ohlelweni lwe-GRC, umhlobiso weMarble, kanye ne-GYPSUM kumhlobiso wasendlini ...
Ngenxa yegciwane leCorona, Siqala ukusebenza ngomhlaka 18 Feb. 2020 ngemuva kwekhefu lesikhathi eside. Ngenxa yesakhiwo esikuGreen, ngithanda ukubonga ukwesekwa kwakho ngo-2019 nokukhathazeka ngathi ngaso sonke isikhathi, Si ...
Eps Cornice Molding Production Line, Umshini we-Eps Foam Cornice, Eps Cornice Umumo Molding Machine, Eps Cornice Molding Line, Eps Foam Cornice Umumo Molding Machine, Eps Cornice Molding Ukwenza,